DHEGEYSO-Puntland oo dhaqdhaqaaqyo ka bilowday gobolada Sanaag iyo Haylaan. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Puntland oo dhaqdhaqaaqyo ka bilowday gobolada Sanaag iyo Haylaan.
Luulyo 17, 2016 3:45 b 0
Ceeri-gaabo, July 17 2016-Dowladda Puntland ayaa waxa ay dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo wacyigelin kawadaa qaybo kamid ah gobolada Sanaag iyo Haylaan, kadib markii maamulka Soomaaliland uu ciidamo soodhoobay degmada Ceeri-gaabo.
Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, ayaa waxa uu Idaacadda Daljir uga warbixiyey ujeedka safarkiisam, waxaana waraysatay weriye Faadumo Cabdullaahi Saleebaan (F.Ladan).
DHEGEYSO-Barnaamijkii Tartan iyo Tacliin oo xiiso gaar ah yeeshay.